Google Duo na-enye ohere ịkpọ oku vidiyo na ndị mmadụ asatọ | Gam akporosis
Otu ọkpụkpọ oku vidiyo aghọwo ihe dị mkpa na Google Duo. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime ya ọhụrụ atụmatụ, abụwo ọtụtụ ihe ndozi. Ọ bụ ọzọ na ya ọhụrụ update. Kemgbe ugbu a gaa n'ihu ọ ga-ekwe omume inwe ndị ọzọ sonyere na oku ndị a na-eji ngwa ahụ. Agbanyeghị na ọ bụghị naanị ihe ọhụụ ka ha hapụrụ anyị maka mmelite ọhụụ a.
N’izu a ka enwee nsogbu banyere ya. Ọ dabara nke ọma, anyị echeghị ogologo oge maka mmelite Google Duo iji dịrị ndụ. N'ime ya anyị na-ahụ na ọnụ ọgụgụ ndị sonyere na otu oku vidiyo ejiriwo okpukpu abụọ.
Ruo ugbu a, enwere mmadụ anọ nwere ike ịnọ na oku vidiyo otu na ngwa ahụ. Google Duo gbanwere nke a na ụdị ọhụụ a, ugbu a ịbụ mmadụ asatọ ga-enwe ike nọ na oku vidiyo. Ọrụ ahụ agbanwebeghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere nke mbụ, naanị ugbu a anyị nwere ike itinyekwu mmadụ.
Ọrụ Google abanyelarịrị na ọrụ ya na blọọgụ gọọmentị ya. Yabụ ndị ọrụ nwere ngwa na ekwentị gam akporo ha nwere ike ịnụ ụtọ ya site ugbu a gawa, n'ihi na emelitelarị. Na mgbakwunye, anyị na-achọta ozi ole na ole.
N'otu aka, Google Duo na-ewebata ọnọdụ nchekwa data. Ọrụ a ga - enwe ike ịrụ ọrụ n'ime ntọala ngwa ahụ. Ekele ya, ọ ga-ekwe omume belata data ị na-eji ngwa. Ezigbo ọrụ, n'ihi na ụdị ngwa ndị a na-erikarị ọtụtụ.
Ọzọkwa, a ga-ahapụ ndị ọrụ ugbu a ndekọ omenala video ozi na ngwa. Dingtinye ederede, emojis na eserese bụ ihe enwere ike iji mee ụdị vidiyo a ugbu a. Obi abụọ adịghị ya, ha bụ akụkọ banyere mmasị, nke nwere ike inyere Google Duo aka. Ọ bụ ezie na ngwa ahụ na-eji nwayọ nwayọ, yabụ anyị ga-ahụ ma Google ọ na-aga n'ihu na-enwe ndidi na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Duo na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị sonyere na oku vidiyo